Senuti maka Mac - Naghachi Music si iPod / iPhone / iPad
> Resource> Nyefee> Senuti maka Mac - The Best Ngwá Ọrụ naghachi Music si iPod & iPhone
Ná ndụ kwa ụbọchị, anyị pụrụ izute ndị na-esonụ ọnọdụ:
1. Mgbe ịmafe a Mac, naanị ịhụ ụfọdụ ndị na-abụghị iTunes zụrụ songs na-abịaghị iTunes Music Library.
2. N'ihi na nke a na mberede okuku, dum ọdịnaya iTunes Library dị nnọọ arahụ.
3. Ụfọdụ songs na-rapaara na ochie iPod na-apụghị depụtaghachiri na iTunes Library.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla nke n'elu kwuru banyere ọnọdụ ewute gị, i kwesịrị iji na-agbalị Senuti maka Mac. Senuti maka Mac bụ obere ngwá ọrụ na-enye gị ohere idetuo songs si gị iPod na iPhone na gị na iTunes Library ma ọ bụ nchekwa na Mac. Nke a bụ ihe iTunes apụghị ime na ebe Senuti-abịa n'ime foto. Ọ na-achọ Mac OS X 10.5 na mgbe e mesịrị. M na-agbalị ya. Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ị nwere ike ibudata ya nwere a-agbalị.
Eche na e ọ bụla Senuti maka Mac ọzọ? Ok, n'ezie, n'ebe na-adịghị ọtụtụ. E nwere ụfọdụ Senuti maka Windows omume, ma ọ bụghị ọtụtụ Senuti maka Mac equivalents. One m na-agbalị na mmasị nke ukwuu bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-arụ ọrụ dị ka Senuti maka Mac. E wezụga na-enye niile atụmatụ dị ka Senuti, ọ na-enye ihe nhọrọ. N'okpuru ebe bụ isi atụmatụ maka Senuti maka Mac Ẹkot - Wondershare TunesGo (Mac).
Ejila okwu m maka ya? Get free ikpe version inwe a na-agbalị! Senuti maka Windows dị ibudata kwa.
Key atụmatụ maka Senuti maka Mac Ẹkot
Mfe Iweghachite - 1 nzọụkwụ maka Mac ọrụ naghachi niile music na listi ọkpụkpọ site na iPod na iPhone ka iTunes Music Library.
Foneelu Duplicates - TunesGo (Mac) ga-tụnyere songs on ọrụ 'iPod, iPhone, ma ọ bụ iPad na ndị a na iTunes Library, nanị na-edegharị ndị a na mpụga nke iTunes Library si iPod, iPhone na iPad ka iTunes Library.
Akwado multiple faịlụ - jiri ya tụnyere Senuti maka Mac, Wondershare TunesGo (Mac) na-akwado na-edegharị ihe faịlụ, dị ka iTunes U, Voice Memos, Pọdkastị, wdg si iPod aka, iPhone, na iPad ka iTunes Library. Na music na listi ọkpụkpọ nwere ike enyefere iPod nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo ka ọrụ 'Mac dị ka mma.
Jikwaa faịlụ na Apple ngwaọrụ - TunesGo (Mac)-eme ihe karịrị Senuti maka Mac. Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na tinye ma song, video ma ọ bụ foto site a Mac ka Apple ngwaọrụ, na-enweghị syncing na erasing data. Na ị na-enwe ike ihichapụ achọghị faịlụ.
Olee otú Jiri Senuti maka Mac Ẹkot - Wondershare TunesGo (Mac)
Download na wụnye TunesGo (Mac) na gị Mac. Ọ ọbụna na-akwado ndị ọhụrụ OS X 10,11, El Capitan;
Jikọọ gị iPod, iPhone, ma ọ bụ iPad na gị Mac na ẹkedori TunesGo (Mac).
Na isi window, ọ bụrụ na ị pịa "Iji iTunes", mgbe ahụ, songs na listi ọkpụkpọ na ngwaọrụ gị ga-agafere gị iTunes Library na ẹdude ndị funneled. Ọ bụrụ na ị pịa "Iji Mac", songs na playlist ga-agafere gị Mac.
2 Ụzọ Nyefee Music si iPad ikuku na kọmputa
Olee otú Gbanwee Data si Blackberry ka Windows Phone
Otú nyefee Photos si PC ka iPad ikuku
Otú nyefee Text Ozi New ekwentị